डा. भट्टराईको प्रश्न : केपी ओली र देउवाको सम्बन्ध के हो ?
काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्र भनेकै चुनाव हुनु हो भनिरहेकोप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। भट्टराईले काँग्रेस नेताहरूको उक्त तर्कलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कांग्रेसको ‘सेटिङ’ रहेको तर्फ आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
उनले संसद पुनर्स्थापनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु हुन्छ भन्दै किन नबुझेको भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले काँग्रेसलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘संसद् पुनर्स्थापनापछि चुनावमा जाँदा दुवै हातमा लड्डु हुन्छ, किन नबुझेको ? कि सेटिंग नै हो ?’
उनले ओलीको असंवैधानिक कदम नसच्चिई चुनावमा जाँदा संविधान धरापमा पर्ने बताएका छन्। भट्टराईले लेखेका छन्, ‘चिसो भनेकै कोकाकोला भनेझैँ केही कांग्रेसी नेताका निम्ति लोकतन्त्र भनेकै चुनाव हुनु दुःखद छ। चुनावमा त ढिलो छिटो जानै पर्छ। तर ओलीको असंवैधानिक कदम नसच्चिई चुनावमा जाँदा (भैहालेमा) संविधान धरापमा पर्छ।’